Ka gudubka naceybka - AFRIKHEPRI
Cunno noocee ah maanta oo loo hayaa caafimaad wanaagsan?
Shroud - Shirkadda Zirignon Grobli
Marka xiriirka jacaylku uu dhimanayo iyo in kale, ha u furfuraan, waxaanu leenahay khatarta ah inaanu ku dhicin bannaanbaxa, waxaa jira wax ka badan xidhiidhka nacaybka ah ee lagu hayo darbiga qiiqa. Nacasku waa ficilka difaaca kama dambaysta ah ee lakulmayo cudurrada jacaylka.
Niyad-jebinta waxaa lagu saleeyaa niyadjab la'aan: "Waan ku necbahay dhimashada sababtoo ah ma i jecla". Sidaa darteed nacaybku waa xidhiidhka ugu dambeeya, ee nuxurkii dhirbaaxada, kaas oo xiriirinaya jacaylka shayga aan wax kala sooc lahayn, laga yaabo in aan waligiis jirin. Waa in aysan noqon "akhri" nacayb sida lover ah by kuwaas oo inkastoo qabka lumiyo uunu uu jacayl (uu sabab nool) nuugayo tamartaa oo dhan si ay u baabba'aan uu "badh" fantasized.
Nacasku wuu ka soo horjeedaa halkii uu ka xumaan lahaa. Tani waxay keenaysaa in lagu daro xiriirka nacaybka ee diiwaanka khayaaliga ah ee sadomasochism halkaasoo aan macquul aheyn in la ogaado cidda ka dambeysa falalka iyo ciddida: cidda keenta ciyaarta? Xaqiiqda, waa isla qofka oo ah labada qof ee isku-dhafan iyo masuq-gashi. Sidaas daraadeed, is-dilka, xiriirka nacaybka. Taas oo ah in ay ku jiraan "silcinta" aan ka faa'iideysanin qaabka qaabaynta ee la'aanta dhexdhexaadiyaha aabaha.
Nacayb xoog wadista ee sadomasochistic ugu danbeyn loo arkaa falcelin ka dhanka ah gobolka Walbahaar markii lover ka niyad helaa gobolka ee wada noolaanshaha la shayga, in dhimashada. Indeed nin nacaybka waa diriyaa ah oo, u diiday, hooyadiis calaamad u dhaqmaan sida uu wax jacayl hoose, oo diiday inuu u dhinto iyo daayaa uu dhintay kaxeeya hooyadiis oo Qaadirka ah, ujeeddo ah si ay u baabi'iso oo si sax ah u beddesho shayga jacaylka jilicsan.
Necbaansho nacayb ah iyo dambiile ayaa ah nacaybka ugu xun, sababtoo ah waxay jaraysaa xidhiidhkii ugu danbeeyay ee ku xidha nin adduunyo ah oo u baddalaya xaalad ah wareer.
Dunidaas la'aanta adduunku waxay ka buuxsameysaa dabeecad murugo leh, ayadoo la neceb yahay nacaybka aan helin jawaab qancin ah oo ku saabsan baahidooda jacaylka. Cudurku wuxuu dunida ku waa cudur jacayl ah in diimaha ayaa isku dayay guuldareysteen si aad ugu bogsiisid, iska dhego-nacayb waa waayo-aragnimo ah psycho-jir ka turjumaya rabitaan ah u doonaya in ay ku noolaadaan, by-haynta sub shay ee jacaylka, adduunkani
Diimaha sidaas daraaddeed waxaa hadda fizzle leeyihiin waa in ay eegaan jihada kale mushkiladda xal ah ee nacaybka waa sheyga wayn ee laalista shayga jacaylka Oo haddii aan hadda isku dayay therapy in psychart Miyaad ka baratay cilmi nafsiga maskaxda ee qiimaha sare leh ee sublimida? Midkale ma daaweyn karo kicinta dilka ah adoo diidaya (waxay noqoneysaa in la mamnuuco) laakiin adoo sifeynaya dareenka asaasiga ah ee hoos yimaada oo go'aaminaya xadhigeeda!
Rabitaanka daaweynta maskaxda waa, adigoo u soo guuraya barta mawduuca, si ay u siiyaan fursad ay si buuxda ugu wada noolaadaan xiriirka daacadnimo leh hooyada masochistic ee taageerada farshaxanku waa bedelka ugu fiican. Mid ka mid ah halkan ayuu awood u yeelan karaa inuu ciidda ku soo celiyo, si uu ugu weeraro, inuu weeraro, inuu ku dhufto, inuu jeexo, inuu ku dhufto, erey si uu u arko midabada oo dhan. Haddii aan iyada cabasho, sabab wanaagsan
Falkan waxyeellada leh ee astaantiisu ku dhici karto xadka taageerada, ma leh dhamaadka loolanka mudnaanta leh. Waa la sii wadaa ilaa ay kaartooduhu xirto haddii loo baahdo, ilaa miyirku ka madhan yahay riyadiisa isla markaana bukaanku uu garto inuu fadhiyo, oo ay ka buuxdo macaan qadarinimo ah. Waxay ahayd markaa wuxuu galay ruuxa ruuxa u roon soo dhaweynta Erayga.
Waxqabadka sarbeebta burbur deggan bukaanka hadalka culminates in soo bixitaanka of a feegaar ku bedel hooyadeed dabada, kii ka mid ah Calaamooyinkiisa ceebeynta iyo macno leh in jiitaan dareenka bukaan dhisay, kuwaas oo ku hamiyo inuu e-mer-Carruurta ee magma. Duulimaadki waxay noqon Word (mabda'a abuure) waxa uu u dhigmaa ee wax qaabeynta iyo jiriqsiga. The shaqo hal abuur aadanaha waa inuu ka soo kabsado iyo noocyo preverbal (xubno dastuurka luqadda) uurjiifka foomam kac ka feegaar wuxuu isku jarjartay.
Ku-soo-galidda Ammaanka Calaamadda wuxuu saameyn ku yeelan karaa barafka qorraxda waayo-aragnimada khayaaliga ah ee nacaybka iyo ka-faa'iideysiga suurtagalka ah inuu qandaraas ku yeesho xiriirka shayga xiriirka.
Qaab-dhismeedka muuqaalku wuxuu caddaynayaa in uu yahay xeeldheer u shaqeynaya dhex-dhexaadinta "nacaybka" ee nacaybka, "cudurkan infantile" ee ragga ah ee maxaabiis ahaanta haysta.
Ugu dambeyntii, waxaan dhihi doonaa in Jaaliyadaani ay xannibeen horumarkooda "omnipotence" ee "ku raaxaysato" iyo "faa'iidada ugu badan", nacaybku waa "waxa ugu wadaagsan adduunka".
Raadinta bilowga 4
Baabi'inta baabi'inta iyo daaweynta maskaxda